Shiinaha Qaabdhismeedka Qaabdhismeedka Qaabdhismeed iyo alaab cusub | Qaab Enuo
Ku saabsan hawo hawo & biyo,taageere & fan shroud qaybo radiator caaryada caagga ah, tayada xakamaynta naqshadeynta iyo soo saarista ayaa ka dhib badan nooca caadiga ah, maaddaama qeybaha noocan ah sida caadiga ah ay ku samaysmeen maaddo PA6 (PA66) / PP + GF (30-35%), iyo tan nooc ka mid ah waxyaabaha waa u fududahay in la bedbaado inta lagu guda jiro habka wax taaj oo kale, iyo u dhiganta wax soo saarka waa u fududahay in laga baxo dulqaad. Sidaa darteed, oo aad u taqaanid sida joogtada ah ee cilladaheeda, si aad u sameysid naqshadeynta hore u-beddelidda ee ku saleysan khibrada iyo Falanqaynta CAE natiijada geedi socodka naqshadeynta hore waxay noqotay fure u ah guusha wax soo saarka caaryada. waxaan ugu yeernaa caaryadan noocan oo kale ah qaab caarid ah.
Caaryada Enuo kooxda waxay leedahay in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan sameynta caaryada horay-u-beddelidda, waxayna u soo adeegtay Valeo, Mahle-behr, Delphi iyo macaamiisha kale ee caanka ah ee auto auto. waxaan si diiran u soo dhaweyneynaa inaad nala soo xiriirto wixii ku saabsan caaryada ka-soo-baxda.